NCA ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်းများကို မကြိုက်ပါက ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်နိုင်၊ NCA တွင် လက်မှတ်ရေးထ? - Yangon Media Group
NCA ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်းများကို မကြိုက်ပါက ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်နိုင်၊ NCA တွင် လက်မှတ်ရေးထ?
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစည်းမျဉ်းများ ကိုမကြိုက်ပါက ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်နိုင်ပြီး NCA တွင် ဝင်ရောက်လက်မှတ် ရေးထိုးရန် UNFC အဖွဲ့ဝင်များအား တပ်မတော်တာဝန်ရှိသူက တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နှင့် UNFC ၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ (DPN) တို့ သတ္တမအကြိမ် တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (NRPC) ရုံး၌ အောက်တိုဘာ၂၃ ရက်ကကျင်းပခဲ့ပြီး အဆိုပါပွဲတွင် တပ်မ တော်မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်က ယင်းသို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်က ”NCA ဟာ အခြေခံဖြစ်ပြီးတော့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းမှာ ဘယ်အချိန်မှာတော့ ဘယ်လိုလုပ် ဆောင်မယ်။ ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမှာတော့ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာတွေက TOR, SOP တွေနဲ့ သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ NCA မှာ အ ခြေခံအချက်တွေမကြိုက်ဘူးဆိုရင် TOR, SOP တွေ ပြင်လို့ရတယ်။ NCA မှာလည်း တချို့ဟာတွေကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လို့ရတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်”ဟု ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်က ပြောသည်။ လာမည့်ရက်သတ္တပတ်တွင် NCA ၏ အားနည်းချက်အားသာချက် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မည်သို့ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကိုပြန် လည်သုံးသပ်ခြင်းပြုလုပ်မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ NCA ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်းများ(TOR, SOP) များကို ပြင်လို့ရကြောင်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီးရာပြည့်က ထပ်လောင်းပြောသည်။
” NCA ဟာ ကျွန်တော်တို့တပ် မတော်အနေနဲ့ကတော့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လည်း သူရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေမှာ ပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေးမဟာဗျူဟာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲ လျှောက်မယ်။ NCA အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ SOP, TOR တွေကိုတော့ ပြင်ကောင်း ပြင်လို့ရပါတယ်။ NCA ထဲမှာ ဝင်လိုက်ပါ။ ဒါကိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်။အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် သဘောတူညီချက်တစ် ခုတော့ ရသင့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်မို့ ဒီကနေအစည်းအဝေး နှစ်ရက်တာ ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ဆွေးနွေးတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲလေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းနိဂုံးချုပ်ပါတယ်”ဟု ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာ ပြည့်ကထပ်လောင်းပြောကြား ခဲ့သည်။ NCA လက်မှတ်မရေးထိုးသေး သော ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမျာ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်း ဆောင်ခူဦးရယ်က NCA တွင်မပါ နိုင်သေးခြင်းမှာ NCA ပြဋ္ဌာန်းချက် အချို့သည်အားနည်းနေမှုရှိပြီး အ ကျေအလည် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် အမြင်ရှိသောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
”အားနည်းချက်တွေကို အားသာချက်ဖြစ်အောင် ပိုမိုပြီးတော့အ ကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ အားကောင်းလာအောင် အဆိုပြု ချက်ရှစ်ချက်နဲ့ ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ အဆိုပြုချက်ရှစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေး နွေးတာ ၁၅လကျော်လာပြီဆိုတော့ မကြာသင့်ဘဲနဲ့ ကြာသွားပြီလို့ မှတ် ယူလို့ရသလား သို့တည်းမဟုတ် ကျွန် တော်တို့ နှစ်ဖက်စလုံးကပဲတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မယဉ်ပါးသေးလို့ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညှိ နှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ နည်းနာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ လွဲချော်နေသလား၊ အားနည်းနေသလားဆိုတဲ့ အတွေးလည်း တစ်ခါတစ်ရံပေါ်ပါတယ်။ သို့သော် တိုင်းပြည်ပေါ်မှာ ရှေ့ထားပြီးတော့ နှစ်ဖက်စလုံးက လက်ခံလျှောက်လှမ်းနိုင်မယ့်အနေ အထားတစ်ခုကို ရောက်အောင်ညှိ နှိုင်းအဖြေရှာမယ်ဆိုတဲ့ရ ည်မှန်းချက် ကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်”ဟု ခူဦးရယ်က ပြောသည်။ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရေးအတွက် UNFC ဘက်မှအစိုးရထံ အဆိုပြုချက်ရှစ်ချက်ရှိပြီး လေးချက် သဘောတူညီမှုရရှိထားကာ ကျန်ရှိအချက်များကို နှစ်ဖက်သဘောတူ ညီမှုရရန် ယခုဆက်လက်ဆွေးနွေး နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပုပ္ပားတောင် မြေကျွံမှု မိုးကြီးမှုကြောင့်ဖြစ်၊ တောင်ကလပ် ဝန်းကျင်တွင် အဆောက်အအုံသစ်များ ထပ်
ရန်ကုန် ယုဇနပလာဇာရှေ့တွင် YBS နှင့်ကျောင်းဖယ်ရီတိုက်မိ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၀ ဦး အတွင်းလူနာအဖြစ် ကုသမှုခံယူ
MTV Movie Award ဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံး တိုက်ခိုက်မှုဆု ရရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီး ဘရီလာဆန်
၁ဝ ဘီးယာဉ်တစ်စီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ပေ ၄ဝ ခန့်အနက်ရှိချောက်ထဲ ထိုးကျ
တပ်မတော်ကို ပြည်သူများ ချစ်ခင်၊ လေးစား၊ ကြည်ညိုသည့် တပ်မတော်ဖြစ်စေချင်ပြီး တပ်မတော်ကို အလ??